Beesha Shiikhaal oo kalsoonida kala laabatay DF Somalia, soona dhoweysay iscasilaada wasiir ku-xigeenka Difaaca | Moment Union Somali Diaspora
Posted on February 9, 2015 by momentunion
imageBeesha Shiikhaal oo kalsoonida kala laabatay DF Somalia, soona dhoweysay iscasilaada wasiir ku-xigeenka Difaaca
Maanta oo ay taariikhdu tahay 7/02/2015 waxaa shir isugu yimid xildhibaannada, Salaadiinta, aqoonyahannada, siyaasiinta iyo qeybaha kala duwan ee beesha Sheekhaal magaalada Muqdisho. Wax garadka beeshu waxaa ay ka doodeen xaaladda ka taagan dalka Soomaaliya gaar ahaan dhismaha xukuumadda, iyo maamulladii ugu dambeeyey ee laga dhisay gobollada dalka. Falanqeyn dheer ka dib beesha waxaa u caddaatey in lagu sameeyey gaboodfal iyo xaqiraad laga xaqirey xuquuqda ka qeybgalka maamulka iyo talada dalka ee ay beesha xaqa u laheyd, masuuliyadda arrintaasna uu leeyahay Madaxweynaha Jmahuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud, asiga oo dhegeha ka furaystay talooyin iyo wax u sheeg badan oo ay beeshu ugu tagtey xafiiskiisa marar badan.
1. Golaha wasiirrada ee dowladda federaalka: Madaxweynuhu wuxuu ku qorey beesha sheekhaal cad quureed oo aan u qalmin, asiga oo jufada hoose ee uu ka dhashayna ka siiyey golaha wasiirrada laba xubnood.
2. Maamulka gobolka Banaadir oo ay beeshu ka mid tahay beelaha asal ahaan degan , wuxuu u diidey in lagu daro maamulka gobolka banaadir.
3. Maamulka dhawaantaan laga dhisey gobolada koofur galbeed Soomaaliya, kaasoo aan laga qeyb gelinin beesha Sheekhaal , taladaasna uu lahaa madaxweyne Xasan Sheekh
4. Gudiga maamul u diyaarinta goblada dhexe, iyadoo beesha ay tahay beesha labaad ee degan labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud, wuxuu madaxweynaha ka hor joogsadey beesha ineey ka helaan gudiga qeybtii ay xaqa u laahyeen, taasoo keentey in beesha isaga baxaan goobtii shirka taasoo uu isaga gudoominayey.
5. Wuxuu madaxweynuhu diidey in maamulka dekedda iyo Airboorka Muqdisho wax laga siiyo beesha Sheekhaal, oo ka mid ah beelaha ku leh ganacsiga ugu badan magaalada kana mid ah canshuur bixiyeyaasha ugu horeeya.